जुन 17, 2019 जुन 17, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments गहिरो निन्द्रा
गहिरो निन्द्राका लागि के गर्ने ? जानी राखौ ! अनिन्द्राले रोग निम्त्याउँछ । मस्त सुत्न नसक्नु वा गहिरो निन्द्रा लिन नसक्नु आफैमा शारीरिक तथा मानसिक जटिलता हो । यसले थप रोग निम्त्याउने खतरा पनि रहन्छ । निदाउनका लागि औषधी सेवन गर्नु राम्रो विकल्प होइन । त्यसले नकारात्मक असर गर्छ । कतिले निदाउने बाहानामा मदिरा सेवन गर्छ, जो एकदमै नराम्रो अभ्यास हो । मस्त मातेपछि बेहोसीमा सुत्ने बानीले स्वास्थ्यमा थप ठूलो हानी गर्छ ।
आफुलाई के कारणले निन्द्रा लागेको छैन भन्ने कुराको पहिल्याउनुपर्छ । कसैलाई चिन्ताले हुनसक्छ, कसैलाई शारीरिक कारणले । कसैलाई बाह्य वातावरणले पनि निन्द्र नलागेको हुनसक्छ । निन्द्रा नलाग्नुको कारण फेला परेपछि सोहि अनुसार निदानको उपाय खोज्न सकिन्छ । त्यसबाहेक अन्य केहि विधी छन्, जसले निदाउन सहयोग गर्छ । गहिरो निन्द्राका लागि के गर्ने ? भन्ने बारेमा तल चर्चा गरिएको छ ।
१. राती सुत्ने समयलाई नियमित गरौं । संभव भएसम्म ८ देखि १० बजेसम्म ओछ्यानमा पुग्नुपर्छ । नियमित सुत्ने अभ्यासले ठीक समयमा निन्द्रा लाग्छ ।
२. सुत्नुअघि हल्का व्यायाम गर्नुहोस् । १५ मिनेटजति ध्यान गर्नुहोस् । यसले मनलाई शान्त तुल्याउँछ र निन्द्रा लाग्छ ।
६. ओछ्यानमा पुगेपछि छटपटी हुन्छ, मनमा कुरा खेलाउँछ भने मनपर्दो रेडियो कार्यक्रम सुन्न सकिन्छ । मोवाइलमा कुनै अडियो उपन्यास सुन्न सकिन्छ । यसले ध्यान एकाग्र हुन्छ र निन्द्रा लाग्छ । यद्यपी भिडियो हेर्ने, चर्को ध्वनी सुन्ने, फेसबुक चलाउने नगरौं, जसले एकाग्रता भंग गर्छ ।
← यस्ता छन्, रोग लाग्ने कारणहरु, जानी राखौ
नेपालको भू-उपग्रह ‘नेपालीस्याट-वान’ले थाल्यो पृथ्वीको परिक्रमा →
औषधिका रुपमा तेजपत्ताका फाइदाहरु
अप्रील 6, 2019 साइन्स इन्फोटेक 4
यार्सागुम्बा र यसको महत्व
सेप्टेम्बर 28, 2018 साइन्स इन्फोटेक 1